Waxa lagu arko London - 17 booqasho oo lama huraan ah oo ay tahay inaadan dhaafin | Safarka Absolut
Maxaa lagu arkaa London
London waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan. Laga yaabee inay u tahay kuwa geesaha muhiimka ah, matxafyada ama taalooyinka. Intaas waxaa sii dheer, waxay na siisaa meelo badan oo kala duwan oo dalab wanaagsan u noqon doona qoyska oo dhan. Hadaad isweydiineyso maxaa lagu arkaa london, markaa maanta waxaan ku siineynaa jawaabaha ugu fiican.
Waa run inaan sii joogi doonno London toddobaadba toddobaad ka dib. In ka badan wax walba maxaa yeelay marwalba way kafiican tahay inaad goor hore sii socoto. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si buuxda ugu raaxaysato wax kasta oo ay ku siiso. Dabcan, haddii aadan haysan intaas oo waqti, ha welwelin. Halkan waxaan kaaga tagi doonaa hage dhammaan meelaha laga arko London.
1 Waxa laga arko London, taalooyinkii la booqan lahaa
1.1 Qasriga Westminster
1.2 Big Ben
1.4 Munaaraddii London
1.5 Tower Bridge
1.6 Katidralka San Pablo
1.7 Xarunta Kensington
2 Matxafyada ugu waaweyn London
2.1 Galbeedka Qaranka
2.2 Matxafka Ingiriiska
2.3 Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah
3 Jardiinooyinka London, beero iyo soojiidasho
3.1 Hyde Park
3.2 Kensington Gardens
3.3 St. James Park
3.4 Filimka 'Filcadilly Circus'
3.6 Barxada Trafalgar
Waxa laga arko London, taalooyinkii la booqan lahaa
Mid ka mid ah joogsiyada ugu horreeya ee qasabka ah ee ay tahay inaad sameyso waa tan. Waxay ku saabsan tahay Palace of Westminster. Dab awgii, wax yar ayaa ka haray wixii ahaa daartii hore. Si kastaba ha noqotee, hadda waxaan ku raaxeysan karnaa in ka badan 1200 qol, iyo sidoo kale in ka badan saddex kilomitir oo marinno ah, oo u dhexeeya. Meel astaan ​​u ah oo aad booqan kartid oo aadan ku sii nagaan karin muuqaalkiisa cajiibka ah. Booqashooyinku waxay bilaabmaan Sabtida 9:15 subaxnimo ilaa 16:30 galabnimo.. Bisha Ogosto, waad ku raaxeysan kartaa labada subax iyo galabba. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 18 rodol illaa 28. Maaddaama tani ay ku xirnaan doonto inaad hage leedahay iyo in kale. Khadadka tareenka dhulka hoostiisa mara ee aad qaadi karto si aad meeshan u timaado waa Wareeg, Jubilee iyo Degmo.
Iyada oo leh qaab Gothic ah oo dhererkiisuna yahay 106 mitir, waxaan heleynaa Big Ben. Waa munaaraddii saacadda laga helay Baarlamaanka Laga soo bilaabo london. Waxaa la bilaabay 1859 mar walbana waxaa la sheegaa inay ka mid tahay saacadaha leh waqtiga saxda ah ee aan u baahanahay. Si aad u gaartid, waa inaad qaadataa isla metroga khadka kor ku xusan. Magaalada kama bixi kartid sawir la'aan meeshan!
Waa la dhihi karaa waa taalada ugu faca weyn London. In kasta oo loo dhisay qaab jaceyl, haddana waxaa lagu dhisay Gothic. Qarnigii 1066-aad, laba munaaradood oo dheeri ah ayaa lagu daray. Tan iyo markii loo caleemo saaray Guillermo Guulwadeyaashii dhacay XNUMX, inta kale ee boqortooyooyinkii isaga ka dambeeyay, ayaa lagu caleemo saaray meeshan. Intaa waxaa dheer, daqiiqado kale ayaa sidoo kale dhacay sida aaskii marwada di. Gudaha, waad ku raaxeysan kartaa Marwada loo yaqaan 'Lady Chapel' ama Geeska Geeska. Sida magaceeda ka muuqata ayaa ah qabriyada waaweyn ee suugaanta. Dabcan, meesha laga soo galo meeshan waa ka qaalisan tahay meelaha kale, laakiin shaki la'aan, way u qalantaa. Waxaad bixin doontaa 23,50 euro. In kasta oo ardayda iyo kuwa hawlgabka noqonaya ay noqon doonaan 20 euro iyo carruurta ilaa 16 kaliya 10,50 euro ah. Waad booqan kartaa maalin kasta, marka laga reebo ciidaha ama Axadaha.
Tower-ka London waxaa sidoo kale loo yaqaanay magac kale oo saaxiibtinimo yar. Inbadan waxay u ahayd munaaraddii argagaxa, maaddaama ay kujireen kuwa fikradaha liddi ku ah boqortooyada. Taasi waa sababta meeshan labadaba Tomás Moro iyo Ana Bolena waa ladilay. Marka, waa meel dahsoon oo leh halyeeyo badan. Dhexdeeda waad ku raaxeysan kartaa dahabka taajku. Labada taaj iyo seefo iyo xataa ushado waad heli kartaa. Ku Qasrigii Dhexe iyo kaniisada Royal ee San Pedro Iyagu waa kuwa kale oo ka mid ah geesaha ay tahay inaad booqato. Halkaas waxaad ku arki doontaa haraadyo badan oo la keydiyay oo kuu qaadi doona waqti kale. Dadka waaweyni waxay bixin doonaan 29 euro. In kasta oo aad ku iibsan karto foojarka qoyska oo ay ku jiraan laba qof oo waaweyn iyo saddex carruur ah 73,50 euro. Si aad u raacdo metro waxaad qaadan kartaa khadadka: Goobo, Degmo iyo DLR. Inta baska lagu raaco: 8,11,15,15B, 22B.
Buundada, Tower Bridge, waa mid ka mid ah taalooyinka lagu arko London. Kadib wadar ahaan sideed sano oo dhismo ah, buundadan ayaa la sameeyay. Habka ugu fiican ee ku biir labada bangi ee Thames laakiin iyada oo aan tan waxyeello u geysan dekedda. Waxay ku xigtaa Tower-ka London dabcan, waa mid kale oo ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee dalxiisayaasha. Dabcan, waad sidoo kale gali kartaa oo aad arki kartaa bandhigga gudaha qiimo dhan 9 rodol. Si loo gaaro, waxaad isticmaali kartaa isla xariiqda mitrooga ee aan horay uga faallaynay.
Katidralka San Pablo
Kaniisadda St. Paul waa tan labaad ee adduunka ugu weyn. Marka, horeyba waan u ogaanay macluumaadkan, priori waa mid kale oo ka mid ah baraha ay tahay inaan booqano. Waxaa dib loo dhisay sanadihii la soo dhaafay si ay goob ugu noqoto daqiiqado kale oo waaweyn. Meherka Carlos iyo Diana ayaa lagu xusay meeshan. Waxa ugu fiican kiiskan waa booqasho la hagayo. Sidan ayay ku siin doonaan dhammaan faahfaahinta qubbad iyo sidoo kale kan Whisper Gallery oo ah 30 mitir. Dabcan, si aad uhesho waa inaad fuushaa jaranjarooyinka 257. Haddii aad tagto metro, waxaad qaadi doontaa khadka dhexe. Si aad bas u raacdo, khadadka soo socda ayaa kuu adeegi doona: 4, 11, 15, 23, 25, 26. Qiimaheeda? 18 lbs.
Sidoo kale Kensington Palace waxay hoy u ahayd qoysaska boqortooyada. Boqoradda Victoria ayaa halkaan ku nooleyd, sidoo kale Lady Di. Layligiisa casaanka ah iyo iridda weyn ee dahabku ku dhammaado ayaa siiya. Meel gaar ah oo sixir ah. Waxaad ku heli kartaa 17,50 rodol. Sidan ayaad ku arki doontaa qolalka gaarka loo leeyahay, iyo sidoo kale geesaha dahabka qaarkood iyo bandhigyo kala duwan. Laga bilaabo 10:00 subaxnimo ilaa 18:00 waxaad heysataa waqti aad uga faa'iideysato meeshan.
Degenaanshaha qoyska boqortooyada Ingiriiska waa Buckingham Palace. Waxaa la dhisay 1703 Waxaad awoodi doontaa inaad gasho gudaha gudaha waqtiyo gaar ah, laga bilaabo Julaay ilaa Sebtember. Qiimaheedu waa 21,50 rodol. Dabcan, waa lagama maarmaan in la arko isbeddelka waardiyaha ka dhacaya guriga hortiisa.
Matxafyada ugu waaweyn London
Waxaad ka heli doontaa Matxafka Qaranka ee Matxafka ee ku yaal Fagaaraha Trafalgar. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo sida oo kale, mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee lagu arko London. Waxay leedahay shaqooyin laga bilaabo sanadka 1250. Halkaas waxaad ku raaxeysan kartaa shaqooyinka waaweyn ee Van Gogh ama Velázquez, iyo kuwo kale. Waxay furan tahay maalin kasta 10:00 subaxnimo ilaa 18:00 galabnimo. Albaabkeedu waa bilaash.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn adduunka. Waxay leedahay waxyaalo waaweyn sida qaybo ka mid ah asal ahaan Roomaanka iyo sidoo kale Giriigga. Waxyaabo badan oo qadiim ah oo aad sidoo kale ku mahadsantahay mahadsanidiisa Gelitaanku gebi ahaanba waa bilaash.
Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah
Madxafyada kale ee leh ogolaanshaha bilaashka ah ayaa kan ah. Waa Matxafka caanka ah ee Taariikhda Dabiiciga ah. Dhexdeeda, waxaad ku arki doontaa wax weyn qalfoofka 'diplodocus' iyo sidoo kale mastodon taasi waa idin soo dhaweyn doontaa. Waxay kugu qaadan doontaa inaad dib uhesho waqtiga dinosaurska iyo xitaa khibrad is-dhexgal ah oo ku saabsan fulkaanaha iyo dhulgariirrada. Waxay noqon doontaa meel fiican oo lala raaco carruurta. Wuxuu furmayaa 10:00 ilaa 18:00.
Jardiinooyinka London, beero iyo soojiidasho
Baarkinka ugu weyn London waa Hyde Park. Waxay ka tirsanayd Westminster Abbey, in kasta oo loo furay dadweynaha qarnigii XNUMXaad. Waxaad soo geli doontaa aag nasasho, oo qurux badan iyo meel aad qoraxdu ka dhici karto ama baaskiil ku wadi karto.
Aag kale oo sidoo kale loo furay dadweynaha ayaa ah waxa loogu yeero Kensington Gardens. Mar labaad, aag la booqdo, socod yar oo fudud iyo ku raaxeysiga jawi deggan oo noo horseedaya inaan maskaxda iyo jirka nasino.
Sidoo kale quruxdeeda iyo sababtoo ah waxay aad ugu dhow yihiin Buckingham Palace, joogsiga meeshan waa lagama maarmaan. St. James Park waxay leedahay haro qurux badan oo shimbiro ka buuxaan. Intaa waxaa dheer, ma jiri doonaan ubax la'aan, duurka iyo dabcan, geedo beroosh ah.
Filimka 'Filcadilly Circus'
Nalalka iyo boodhadh fara badan ayaa ku kulmaya Piccadilly Circus. Hareeraheeda, waad ka heli doontaa shineemooyinka ugu fiican sidoo kale tiyaatarada iyo dukaamo aad u kala duwan. Waa mid ka mid ah xafladaha waaweyn iyo meelaha firaaqada ah ee aad ka heli doontid bartamaha London.
Waan illoobi karin London Eye, xitaa haddii aan rabno. Waa mid ka mid ah qodobbada ugu muuqda London. Waa giraangir Ferris ah oo qaadatay qiyaastii toddobo sano in la dhammaystiro. Sanadkii 2000 ayay ahayd markii la caleemo saaray. Waxay leedahay qiyaastii 32 qol oo ka samaysan muraayad. Mid kasta oo ka mid ah 25 qof ayaa la geli karaa. Aragtida laga dheehan karo ayaa ka cajaa’ib badan. Waxay ku taalaa Buundada Westminster. Albaabka laga soo galo waa 24,95 rodol.
Barxad kale oo ugu muhiimsan. Dhexdeeda waxaa ku yaal Tiirka Nelson, ku dhowaad 50 mitir. Waa goob had iyo jeer aad u camiran. Ma rabtaa inaad halkaa gaarto? Waad qaadan kartaa tuubada Charing Cross, Khadadka Waqooyiga, Bakerloo.
Sidii aan soo sheegnay markii hore, way badan yihiin geesaha iyo meelaha ugu waaweyn ee lagu arko London. Laakiin maadaama aynaan badiyaa helin fasax daa'in ah, had iyo jeer way fiicantahay in diirada la saaro meelahaas aadka loogu taliyay. Sidan oo kale, waxaad ku buuxin doontaa xusuus mahadsanid adoo ku soo talaabsaday meelihii aasaasiga ahaa ee magaalo weyn oo sidan oo kale ah. Ku raaxayso kuwa kale ee London!
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa lagu arkaa London
Japan Rail Pass, habka ugu raaxada badan ee loogu safro Japan